ဆေးပညာဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုကို သက်သေပြပြီး
၆ လအတွင်း ပြန်လည်မဖြစ်ခြင်း ၇၆%.*
ယားယံမှုကို သက်သာစေပြီး ယားယံသောအခါ ကုတ်ချင်သော စိတ်ခံစားမှုကို လျော့ကျစေပါသည်။
အာဟာရဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး Lipids များပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပါသည်။
အရေပြား ပိုမိုသက်တောင့် သက်သာရှိစေပြီး အချိန်ကြာလာသည် နှင့် အမျှ ပိုမိုသန်စွမ်းစေပါသည်
ခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားခြင်း- စေးကပ်မှုမရှိခြင်း - ဆီမဟုတ်တဲ့ အထိအတွေ့ လျှင်မြန်စွာ စုတ်ယူနိုင်ခြင်း- မွှေးရနံ့ မပါဝင်ခြင်း
* ဆေးပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှုကို အသက် ၆ လမှ ၁၅ နှစ် အတွင်းရှိ atopic dermatitis ရှိသော လူအယောက် ၁၃၀ ဖြင့် တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် ၆ လကြာ စမ်းသပ်ထားပါသည်။
ညှစ်ဆေးတောင့် ၇၅ မီလီလီတာညှစ်ဆေးတောင့် ၄၅ မီလီလီတာ
Lipigenium™ complex သည် အရေပြား အကာအကွယ်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးပြီး အဆီဓာတ် (Lipids) နှင့် ပရိုတိန်းများ ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။
PEA သည် ယားယံမှုကို သက်သာစေပြီး ကုတ်ချင်သော စိတ်ခံစားမှုကို လျော့ကျစေပါသည်။
The Skin Barrier Therapy™ patent သည် ဘက်တီးရီးယားများ ဝင်ရောက်ကပ်တွယ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်က ကုသမှုခံယူနေတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ပါ။
တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် (သို့) နှစ်ကြိမ် ၃,၆,၉ နည်းလမ်းသည် မှန်ကန်သော ပမာဏ နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များအတွက် စနစ်တကျ နေ့စဉ် အသုံးပြုနိုင်သော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် ပိုကြာရှည်ခံပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ရရှိစေဖို့ရန်အတွက် Atoderm Intensive baume ကိုမှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း သုံးစွဲပေးပါ။
အဆင့်များ 1 အရေပြားကို Atoderm Huile de douche (သို့) Atoderm Huile de douche or Atoderm Intensive gel moussant ဖြင့် သန့်စင်ပါ
အဆင့်များ2Atoderm Intensive baume ကို အရေပြားပေါ်တွင် အသုံးပြုပါ
အဆင့်များ3အရေပြားမှ စုပ်ယူသည် အထိ ညင်သာစွာ နှိပ်ပေးပါ
ကလေးငယ်များအတွက် ၁ စင်တီမီတာ ပမာဏ3ကြိမ်
( မျက်နှာ၊ လည်ပင်း နှင့် ရင်ဘတ် - ၁ စင်တီမီတာ )
(ဘယ် ညာလက်မောင်းနှင့် ကျောကုန်း- ၁ စင်တီမီတာ )
( ဘယ် ညာခြေထောက်- ၁ စင်တီမီတာ )
အရွယ်ရောက်ကလေးများအတွက် ၁ စင်တီမီတာ ပမာဏ6ကြိမ်
( မျက်နှာ နှင့် လည်ပင်း - ၁ စင်တီမီတာ )
( ရင်ဘတ် - ၁ စင်တီမီတာ )
( ကျောကုန်း- ၁ စင်တီမီတာ )
( ဘယ်-ညာလက်မောင်း - ၁ စင်တီမီတာ )
( ဘယ်-ညာခြေထောက် - ၁ စင်တီမီတာ )
လူကြီးများအတွက် 1cm ပမာဏ9ကြိမ်
( မျက်နှာ နှင့် လည်ပင်း - 1cm )
( ရင်ဘတ် - 1cm )
( ကျောကုန်း- 1cm )
( ဘယ်-ညာလက်မောင်း - 1cm )
( ဘယ်-ညာခြေထောက် - 1cm )
တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် (သို့) ၂ ကြိမ်
အဆင့်များ 1 အရေပြားကို Atoderm Huile de douche (သို့ ) toderm Huile de douche or Atoderm Intensive gel moussant. ဖြင့် သန့်စင်ပါ
ကလေးငယ်များအတွက် 1cm ပမာဏ3ကြိမ်
( မျက်နှာ၊ လည်ပင်း နှင့် ရင်ဘတ် - 1cm )
(ဘယ် ညာလက်မောင်းနှင့် ကျောကုန်း- 1cm )
( ဘယ် ညာခြေထောက်- 1cm )
အရွယ်ရောက်ကလေးများအတွက် 1cm ပမာဏ6ကြိမ်
တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် (သို့ ) ၂ ကြိမ်
အရေပြားခြောက်သွေ့မှု ဆက်လက်ရှိနေပါက သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန် နှင့် သွားရောက်ဆွေးနွေးပါ
အလွန်အမင်းခြောက်သွေ့ပြီး ယားယံသော အရေပြားပိုင်ရှင်များအတွက် စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်စေသော အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ ယားယံခြင်း နှင့် တင်းရင်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ခြောက်သွေ့ခြင်းသည် မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်စေ တစ်ခြားသော ပြင်ပ အရာများ ကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အချိန်ကြာလာပါက အရေပြားအကာအကွယ် ပြောင်းလဲသွားပြီး ဘက်တီးရီးယားများ ပေါက်ဖွားနိုင်ကာ အရေပြားပိုမို အားနည်းလာပြီး ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ နေ့စဉ်ကုသမှု လိုအပ်ပါသည်။
ရလဒ်များသည် ခိုင်လုံသောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမှ ရရှိသည်
ယားယံခြင်း နှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေခြင်း
ယားယံခြင်း နှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေခြင်း ၉၅% (၁)
(၁) အသုံးပြမှု စမ်းသပ်ချက်ကို အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၆၅ နှစ် အတွင်းရှိ သာမာန်ခြောက်သွေ့ အသားအရေမှ အလွန်အမင်းခြောက်သွေ့သော အသားအရေရှိသူ အယောက် ၂၀ ဖြင့် ၇ ရက်ကြာ စမ်းသပ်ထားပါသည်
(၂) ဆေးပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှုကို အသက် ၆ လမှ ၁၅ နှစ် အတွင်းရှိ Atopic dermatitis ရှိသော လူအယောက် ၁၃၀ ဖြင့် တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် ၆ လကြာ စမ်းသပ်ထားပါသည်။
၁၀ ယောက်တွင် ၉ ယောက်သည် ထပ်မံကုတ်ခြင်း မရှိတော့ပါ (၁)
၆ လအတွင်းပြန်လည် မဖြစ်ခြင်း ၇၆% (၂)
ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများသည် အရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သဘာဝအတိုင်းရှိပြီး မျှတနေဖို့ လိုအပ်သည်။ ဓာတ်မတည့်မှုများသည် အရေပြားတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ လိုအပ်သည်ထက်ပိုများနေခြင်းကြောင့်ရောဂါပိုဆိုးစေသည်။ ဤမူပိုင်ခွင့်သည် အရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးကပ်တွယ်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးပါသည်။ ဤမူပိုင်ခွင့် patent သည် NAOS Research ၏ မူပိုင်ဖြစ်ပြီး Aix-en-Provence တွင်ဒီဇိုင်းပြုထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ထုတ်လုပ်ထားသည်။
အရေပြားသည် ပတ်ဝန်းကျင်မှ အရာများကို ကာကွယ်ပေးသော သဘာဝအတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ခြောက်သွေ့၍အလွန်အမင်းယားယံသော အရေပြားဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ၎င်းအတားအဆီးသည် lipid နှင့် protein များ ကင်းမဲ့ပြီး ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ဤမူပိုင်ခွင့် patent သည် NAOS Research ၏ မူပိုင်ဖြစ်ပြီး Aix-en-Provence တွင်ဒီဇိုင်းပြုထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ထုတ်လုပ်ထားသည်။